Mepu dzisiri pamhepo pa iPhone nhanho nhanho nhanho | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | iPhone, Noticias, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Yakaenda kare inguva iyo a GPS, Chishandiso chihombe uye chinodhura icho chaingokwanisa chete kumhanyisa iyo yataurwa GPS, kuenda chero kwatisingazive. Kwemakore zvave zvichikwanisika kushandisa zvinoshandiswa zvinoshandisa mepu dzisiri pamhepo kubva kunharembozha yedu, asi kuti ushandise maapplication aya waifanira kubhadhara mari yakawanda kana kuiwana neimwe nzira. Uye kwenguva shoma shoma, yemahara-inotungamirwa isingatenderwe mepu maapplication ave ave kuwanikwa.
Inonyanya kuzivikanwa ndeyeGoogle Mepu, asi muchinyorwa chino hatisi kuzotaura nezvemamepu einjini huru yekutsvaga. Icho chikonzero chiri nyore: hatigone kurodha mepu dzenzvimbo chero uye zvatiri isu chikumbiro chinotibvumidza kurodha chero mepu. Iwo akanakisa emahara emahara emahara ayo anotitungamira nezwi ndiwo Nokia Pano.
Nguva refu yapfuura, Nokia yakawana imwe yemakambani maviri akakosha emepu uye yakapa mamepu emhando yepamusoro pamafoni avo, mahara uye zvaititendera dhawunirodha chero mepu yepasi kazhinji sezvataida, saka zvaisamanikidza kuvasiya vakachengetwa pachigadzirwa. Uye ikozvino, kwenguva yakareba, isu tinemamepu anowanikwa pane iOS.
Maitiro Ekurodha Mepu kubva kuNokia Pano
Chekutanga pane zvese, taura zvaunofanirwa kuita kunyoreswa neNokia Pano (unogona kubva kuapp) kurodha mepu.
Tevere, isu tinoita zvinotevera matanho:
Tinotamba pamitsara mitatu.
Tinobaya mamepu ekurodha pasi.
Tinobata Tora Mepu yako izvozvi.
Tinotarisa mepu yatinoda kurodha pasi.
Tinobaya museve wezasi uye unomirira kuti utore.
Pekupedzisira, kuti tidzokere kumepu, tinobata kakawanda pamuseve kudzoka. Ivo vangadai vakatowedzera bhatani rekudzokera kumamepu zvakananga.
Uye ndizvozvo. Uchishandisa mepu ndi inonzwisisika. Iwe unongofanirwa kutsvaga kubva pagirazi rinokudza, wobata miseve icon uye sarudza nzira dzekutakura. Ehezve, izwi muSpanish rinofanira zvakare kutorwa pasi kana kuti richataura nesu muChirungu. Izwi muSpanish rinogona kuvandudzwa, asi chakakosha ndechekuti isu tinowana iwo mirairo nenzira kwayo.
Mepu ndezvemahara izvozvi, asi isu hatizive kuti zvichave zvakamira sei mune ramangwana seAudi, BMW naDaimler vachangobva kuzvitenga. Ndinovimba zvinhu hazvichinje, nekuti mamepu akanaka kwazvo. Uye kana naivowo vakasununguka uye tichigona kuzvishandisa kunze kwenyika, chii chimwe chatinga kumbira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mepu dzisiri pamhepo pa iPhone nhanho nhanho nhanho
* Kana isu tine iphone 1.1.13 kana yepamusoro: tanga iyo iLM 1.1.13+ Rongedza pasuru uyezve iyo iLM package mune iyi odha.
* Kana isu tine iPhone ine vhezheni yapfuura 1.1.13, chete iLM package.
Ndeupi musiyano uripo pakati pe 1.1.3 kumusoro kana kukwira kupfuura 1.1.3: S ???
Zvakare, iri 1.1.3, kwete 1.1.13.
Ndokumbirawo, unganditsanangurire chii chandinofanira kuita kana ndine 1.1.4?
Zvakare, ndatenda nekudzokorora, iko kunyorera kwakanaka kwazvo.
Ini handisi kuwana nzira yekuisa mepu dzangu kuburikidza neSSH ne winscp. Ndine iyo 1.1.4. Ndatenda, unogona kundibatsira here?
Pindura kuna jbautista
Iwe unofanirwa kuenda kumudzi faira uye kubva ipapo nzira yakaratidzwa.
Iwe unofanirwa kugadzira iyo Mepu folda.
Mhoroi, maita basa nekundiudza iko kukanganisa kwatochinjwa.
Ndine urombo kukuzivisai kuti iyo vhezheni yacho 1.1.14 iyo inozivikanwawo se1.1.4, saka iyo vhezheni itsva iri 1.2 ndokuzotumidzwazve zita rekuti 2.0.
Kana iwe uine 1.1.14, sekutaura kunoita dzidziso, unofanira kutanga waisa iyo "iLM 1.1.13+ Fix" uyezve iyo "ilm" inoita kunge yekutanga, asi ivo vari vaviri, asi handizvo.
Google yakavharira ip yangu yekuita izvi 🙁
Kwandiri, "gare gare" zvaireva "pakutanga", saka kana uine 1.1.4 unofanirwa kuisa chigamba 1.1.3+ (ona "+" kumashure) 🙂 uyezve iyo ilm.
Ehe, ini ndine 1.1.4 uye ini handina kuzvinzwisisa kusvika gare gare. Kunyangwe ini ndisati ndagona kuratidza nemamepu kana zvichienda kana kwete.
uye zviri nyore? chii CHINOTYISA. Ini ndinofunga zviri nyore kuwana wifi nzvimbo uye nekuona mamepu online.
ehe hongu, nekumashure ini ndanga ndichitaura nezvakamboitika kuti tichakanganisa, chero munhu anazvo.
Zvinoshamisa sei kuti Google yakavharira IP yako.Zuro ndakagadzira mepu mbiri uye pasina matambudziko, wakaita mangani?
mangwana richava rakachengeteka kwazvo.
Ndine 1.1.4 uye zvinofamba zvakanaka uye pasina matambudziko.
Kana mumwe munhu achida mepu yeMadrid, ini ndichaiisa.
Zvakareruka kwavari kuti vapfuure iwe mamamepu asi zvinonetsa kuti mumwe munhu ave neakafanana newe, zvisinei ivo vanogona kuchinjaniswa uye izvo.
PS: «Kuvharika kweGoogle ndekwenguva pfupi nekuda kwenzira yekuchengetedza inoona kurwisa uye kudzokorora zvikumbiro kubva kune imwechete IP. hapana chekutya nazvo. "
Chirongwa hachikodzeri ini. Kana ndapa Global Map Dhawunirodhi Chishandiso.exe haivhure. Chero mazano?
Pindura kune arralbatros
mmm..ami dhairekitori reMepu rakange ratogadzirirwa ini, zvinoita here? Ini ndinoteedzerawo mukati mefaira nemamepu akatogadzirirwa iphone uyezve pafoni ndinovhenekera ILM uye havaonekwe kwandiri ... pane chero munhu anoziva zvandiri kukanganisa?
Iwe unofanirwa kuteedzera mepu imwe neimwe mufaira seMadrid kana Barcelona.
ndiko kuti ... mukati meMepu ndinogadzira dhairekita inonzi Madrid (semuenzaniso) uye mukati ini ndinoteedzera dhairekitori iro iro chirongwa chakagadzirirwa chinotipa?
Mhoroi, zvinondibvumira kufamba mumepu, asi haikwanise kuwana kero kana ndikatsvaga mukati memepu, chero mhinduro? Iine kero dzakachengetedzwa dzinoshanda, kunyangwe nzira iri pakati pemakero maviri akachengetedzwa.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri se alesuco. Ini ndinoisa mepu, ini ndinopa mepu muILM, asi ipapo hapana mepu inoonekwa mumamepu eGoogle.
Arralbatros iwe uri nani kupfuura ini, kunyangwe iyo ILM haina kuoneka kwandiri lol ini ndaisa dhairekitori iyo inopa iyo chirongwa chakagadzirirwa mumamepu folda kuburikidza neSSH uye haina kubuda, hapana nzira ...
Izvo hazvishande kwandiri kana. Ini ndinodzima wifi, ndinovhura iLM, ini ndinosarudza mepu yandakagadzira kana imwe yandakaburitsa kuitira kuti dai ndisina kuzviita nemazvo, ndinosarudza Action Link dzimwe nguva uye imwe Action Copy kuitira kana, pakupedzisira Enda ku Mamepu, uye haina kuoneka chinhu zvachose.
Ini ndakaisa uye kuburitsa iLM 1.1.13+ Fix uye iyo iLM package kuyedza kuzviisa pamwe chete kana zvakasiyana, asi ikozvino muInstall chete iLM ver 0.2.1 inoonekwa, yandisingazive kana yaive yekutanga.
Pane mumwe munhu angandibatsira here? Ndinoda Anwendung ichi. Ndatenda.
Ngatione usati wafanirwa kuisa gadziriso kutanga uye iyo ilm
ikozvino ndinofunga iyo nyowani ilm haichadi gadziriso futi.
Iyo dzidziso inoshanda nekuti ini ndinoshandisa iyo uye zvimwe zvimwe kubva pano zvakare zviteedzere nhanho nhanho uye iwe uchaona kuti zvinoshanda sei.
tarisa zvakanaka kune zvinyorwa zve iphone.
uye isa mamamepu mukati meye mepu folda uye mukati meiyo dhairekodhi dhairekita mepu imwe neimwe
Zvakanaka, handikwanisi ... hehehe! Zvinondishora !! ndezvekuti ndakavaisa munzira iyo inoti, ini ndinovhenekera ILM uye havawoneki pane rondedzero ... sekunge ndisina kuisa iyo munzvimbo chaipo, wadii kunyange ichitombo ...
Izvo zvakakosha kwazvo kuti dhairekitori uko mafaera ayo Global Map ari kuzogadzira mudanho rekutanga anozotorwa pasi kutanga nezasi rezasi "_". Kuti ndidzivise matambudziko, ini ndinogadzira iyo kare neiyo windows yekuongorora uye ipapo ndinoitsvaga muGlobal Mepu ine "set" bhatani, iri kumusoro.
Mushure mekubaya pakanzi "Uncheck any tiles with ..." chirongwa chinogadzira mufolda inotanga ne _ shanu maGPSFS mafaira asiri iwo anofanirwa kuteedzerwa ku iPhone.
Tevere tinobaya pane iyo «-> iPhn» kiyi, uye mu «Mepu Zita…: Mukuburitsa, kuti ndidzivise matambudziko, ndasiya nzira inoonekwa nekumira, iyo inogadzira iyo iphone_map dhairekodhi paDesktop, uye kuti mushure mekudzvanya bhatani «Maitiro (tinya pano…)» uye nekumirira kuti ipedze, ichava mafaera maviri, «Com.apple.Maps.plist» uye «MapTiles.sqlitedb» ayo ndiwo atinofanira kuisa ku iPhone yedu.
Kuti tidzivise matambudziko, kana tichida kudzokorora maitiro kakawanda nemamepu matsva, ndinodzima iphone_map folda kubva pakombuta, ndotanga maitiro.
Chekupedzisira, kune avo vasina Wi-Fi, chirongwa che "iPhone PC Suite" chinokutendera kuti ubatanidze iyo iPhone nePC kuburikidza netambo.
ILM 1.1.13+ Fix package haioneki kwandiri. Ndine 1.1.4, pasuru iyoyo inodiwa here kana ndinogona kuisa iLM chaiko ??
iyo ilem yekugadzirisa pasuru haisisipo, ingoisa iyo ilm uye ichazoshanda, ivo vakatogadzirisa kare.
Kwandiri, iyo Media folda inoonekwa mukati meya mobile folda uye kwete mukati memidzi. Ndiko kwandinofanira kuteedzera mafaera kana ndinofanira kugadzira imwe dhairekodhi inonzi Media mukati memidzi?
anoisa pamusoro kana iwe uine 1.1.3 kana 1.1.4 mune nhare neimwe nzira mumidzi
Hongu, ndazoona gare gare, ndezvekuti ini ndisingachashiviriri uye ndanga ndisati ndapedza kuiverenga, ndine hurombo.
Uye ndatenda futi.
Iyo ip inogara yakavharwa, haindibvumidze kuti nditore mamapu zvachose ,,, ndakaedza kumirira kwemazuva mashoma uye hapana. iyo block inoenderera chero mazano?
Ndakatoyedza kuchinja ip kero asi kuvharirwa kuri kuenderera mberi ,,,
Mhoroi, ndine Mac uye handikwanise kuvhura mafaera kana exe zvirongwa, ndinozviita sei ipapo ???
Chirongwa chakanyanya kudhakwa, ini ndakavharira IP neChishanu uye nhasi Muvhuro ndakaedza kudzika zvakare uye handina kusvika kukopa mepu painondiudza kuti ndakavharwazve ...
Unogona kuisa mepu yeMadrid? Ndingafarire chaizvo, maita basa!
Aigona here mumwe munhu kundiudza kubva kwandinogona kurodha mepu, nekuti iyo yeArgentina inobuda isina chinhu pamwe nenyika dzinoverengeka dzekuSouth America.
Zvakadii nezve ini ndakaisa sosi in7ane.com sosi pane yangu ipod yekubata, asi pandinotarisa kuisa map map mafaera, ndinotsvaga uye haioneke, unogona kundibatsira neizvi, ndatenda
Pindura kuna gusny
Asi zvakashanda here kune yakaputsika mutirongo 2.0? XD
Pindura kuna angellpdgc
angellpdgc, ye2.0.1 iri OfflineMaps. Zvakafanana mashandiro sezvandinonzwisisa.
Asi nechirongwa ichi, kusave pamhepo haugone kutsvaga migwagwa pamepu, handiti?
Ndine vhezheni 2.0.1 ye iphone uye ini ndawana offlinemaps ekushanda, asi chandisingakwanise kuwana ndechekuti inoenda kana pasina kubatana kweWi-Fi, mumwe munhu anogona kundipa tambo ???
Pindura kune zvinoshamisa
Zvakanaka ini ndoda ruzivo nezve kwandinowana iyo yekumisikidza chirongwa .. Ndatenda
Ndine iphone ine firmware 2.2 inowedzera repo uye kana ndikagadzira mepu yeapp apps, iLM inoonekwa asi pandinoyedza kuiisa ndinowana meseji inoti «» Kanganiso haina kukwanisa kutsanangura rumwe ruzivo pa http://jasonkit.googlecode.com»Uye hapana chinoitika, chero rubatsiro maringe neizvi, pamberi pekutenda zvikuru
Ndine urombo nekusazvinzwisisa asi handizive kuti ndopinza sei iphone yangu kuwedzera mamepu eARGENTINA inova ndiyo yandinoda kana uchikwanisa kunditsanangurira saka ndinoedza kuiisa thanks atte. LUCAS G. PEDRINI
Ndine iphone ine firmware 2.2 inowedzera repo uye kana ndikagadzira mepu yeapp apps, iLM inoonekwa asi pandinoyedza kuritakura ndinowana meseji inoti "" Kukanganisa kutadza kutsanangura rumwe ruzivo pa http://jasonkit.googlecode.com” uye hapana chinoitika, chero rubatsiro maringe neizvi, pamberi pekunditenda zvikuru
Pane chishandiso chitsva chinokutendera kuti utarise mepu dzisiri pamhepo kurodha pasi kubva kuchitoro.
Kuwedzera pakuona mepu, ichi chishandiso chinokutendera kuti utsvage nzvimbo uye uverenge nzira HAUWE usiri pamhepo ...
MAPA ECHOKWADI ANOBvumira KUTI TSVAKA NZVIMBO NEMITANDA + WEDZIDZA MITAMBO Pasina CHINODIWA CHOKUSANGANISWA ...
Ndine iphone 3g, mumamepu kana poindi yacho ikaonekwa, asi handikwanise kutsvaga nzira yekuitevera kubva pane imwe nzvimbo kuenda pane imwe, chii chandingaite
Pindura kune isacc
Mhoroi, ndiri kufarira kuendesa maGPSFS mafaira kuECW, mumwe munhu angandibatsira
Pindura kuna Is
Grrrrrrr google akandivharira nekuita izvi…
Pindura kuna Grrrr
Izvi hazvishande, repo haina kana kuvapo, zviwedzere patsva
iCloud yatotibvumidza kuti titore dzadzimwa vokukurukura uye mamwe marudzi emafaira